Nhau - Kwidziridza Fuel Line Kuti Ptfe | BESTEFLON
Ndiwedzere Fuel Line Kuti Ptfe | BESTEFLON
Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzemabhureki emota, inogona kukamurwa kuita hydraulic brake hose, pneumatic brake hose uye pombi yekuputsa pombi. Maererano nezvayo, yakakamurwa kuita rabha akamedura hosipaipi, nylon akamedura hosipaipi uye PTFE akamedura hosipaipi
Rabha akamedura hosipaipi ine zvakanakira yakasimba tensile simba uye nyore kumisikidza, asi chakanakira ndechekuti pamusoro iri nyore kukwegura mushure mekushandisa kwenguva refu
Kana iri tembiricha yakadzika, iyo tensile simba reyiloni brake hose ichave isina simba, kana ikakanganiswa nevekunze mauto, zviri nyore kutyora
Asi PTFE hose ine yakanyanya tembiricha yekudzivirira, yakaderera tembiricha, yakanyanya kumanikidza kuramba, kupfeka kuramba, ngura kuramba uye mamwe maitiro, hupenyu hwakareba hwebasa, haudi kugara uchitsiviwa. Anogona kutsiva zvikanganiso zvezvimwe zvinhu zviviri
Kudzivirirwa, kurarama kwenguva refu, uye kuita kunofanirwa kuve kwako kwekutanga pekutanga. E85 kana ethanol yakaratidza kuve huni hunochengetedza uye hunoshanda hunogona kupa inodiwa octane nhamba uye simba rine simba rekukumbira kunyorera. Asi zvinowedzerwa mumafuta emazuva ano zvinogona kuomesa nekudzikisira zvinhu zvakawanda. Izvi zvinogona kutungamira kune zvingangove zvine ngozi uye zvinogona kusiya hwema hwakaipa. Kana peturu ichinge yadzikira, hosipaipi hosipaipi inogona kusvibisa uye kuvhara iyo injector yemafuta uye carburetor chiteshi, zvichikanganisa mashandiro uye zvichikonzera matambudziko
Mhinduro yakanakisa ndeye polytetrafluoroethylene (PTFE) zvinhu. PTFE ipurasitiki zvinhu ndiyo yakatetepa uye yakapusa pombi yemafuta inowanikwa. Inobatanidza yakakwirira yakasununguka giredhi 304 simbi isina simbi yakarukwa neyakaomarara yemukati PTFE chubhu kuwedzera kuyerera, uye iyo yekunze yekunze kuvaka inopa zvinoshamisa kushanduka. Iyo yemukati PTFE chubhu yakakodzera kushandiswa nechero mafuta uye inogona kumira tembiricha inosvika 260 degrees Celsius. Icho chinhu hachikanganiswe nekudzikira kwemafuta, saka mafuta emafuta haabude
Kazhinji kurudziro yemafuta system:
Paunenge uchiisa PTFE hosipaipi pamotokari, chengeta hosi dzemafuta kure nemhepo inopisa, mativi akapinza uye zvikamu zvinofamba. Nguva dzose tendera kubvumidzwa kwakakwana kwekufamba kwesimba system. Tarisa kubvumidzwa pakati pekumiswa uye kufambisa system zvikamu. Ive neshuwa yekutarisa iyo yekumisa zvinhu mukati meyakaitika nzira kuti urege kusvina kana kuwedzera mafuta emafuta. Pamapombi emafuta anokanganiswa nemarara emumugwagwa uye tembiricha yakakwira, shandisa PTFE mafuta hoses akarukwa nesimbi isina waya kana waya yakaoma. Ive neshuwa yekukochekera hosipa zvakasimba kuti udzivise kupaza. Jig inobatsirawo kudzikisa kuzungunuka kwezvimwe zvinhu. Shandisa zvakakodzera kukamura fittings kana hose kuburikidza nepaneru
Iwe unogona zvakare kuda
PTFE FUEL HOSI
PTFE yakarongedzwa pombi
Post nguva: Sep-17-2021
Rwazvino ruzivo uye maitiro ekambani yedu uye inoenderana indasitiri ruzivo rwePTFE HOSE.
PTFE mutsara wemafuta mubvunzo chii brand uye wh ...
Simbi yakaoma mutsara kana Hunhu PTFE mafuta mutsara ...
ptfe rakarukwa hosipaipi, Yakagadziriswa Ptfe Hose - 939 / 939b, 6an Ptfe Hose Gungano, ptfe hose, ptfe yakavharwa hosipaipi, PTFE hose gungano,